Ravalomanana vs Rolland Ratsiraka | GAZETY_ADALADALA
« ILAY MATY VOALOHANY Filoha, Tsy filoha »
keke, on 29/01/2009 at 11:39 said:
Namaly ny Quay d’Orsay fa lainga no nolazain’i Ravalomanana, fa fifanatonana no nasainy aroso, fa tsy filazana velively momba ny maha-tompon’antoka an’i Rolland Ratsiraka.
Aiza ny filazany Quay d’Orsay io? Hoy ve izy hoe Ravalomanana ment….?
Avy amin’ny tompon’ny blaogy: Ny fampielezam-peo rehetra dia samy nilaza izay avokoa, ary raha tsy diso aza ny fihainoako dia hatramin’ny RFI, izay namelabelatra zavatra maro tokoa momba ny mpitondra ankehitriny. Avoakako daholo moa ny lafin-kevitra rehetra toy izao mba tsy hanenjehanao ahy aoriana hoe nirona tstsy aho, ka tsy naseho ny taroa, na mitongilana etsy ka tsy mijery ny ery!. Mankasitraka indrindra ny fanehoan-kevitra rehetra e!. Fampitàna sy vaovao re sy hita eny rehetra eny no ataontsika
tomavana, on 30/01/2009 at 11:54 said:
ikalamako, on 30/01/2009 at 8:57 said: